Kenya: Sababa Ammaanka Ayuu Ujoogsaday Dhismaha Safaaradeena Magaalada Muqdisho.
Monday March 13, 2017 - 10:12:00 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Kenya ayay ku sheegtay in la joojiyay dhismaha safaaradda Kenya ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya.
sawir muujinaya weerar lagu qaaday xarunta UNDP Muqdisho
Kenya ayaa sheegtay in weerarada Al Shabaab ee kusii xoogeysanaya magaalada Muqdisho ayay sabab u yihiin in la hakiyo dhismaha safaaradeeda Soomaaliya.
Warsaxaafadeed ay ku saxiixantahay wasiirradda arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu faah faahiyay in ammaanka caasimadda Somalia oo maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaya uu sababay in shaqaalaha Kenyaanka ah sii wadi waayay howshii dhismaha safaaradda.
Aamina Maxamed oo la hadlaysay Guddiga Difaaca iyo Arrimaha Dibadda ee Baarlamaanka Kenya ayaa sheegtay in mashcruuca dhismaha safaarada uu soo bilowday bishii Augst ee sanadkii 2015, laguna waday in la dhameystiro dhamaadka sanadka 2016.
Bogga wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ee Internetka ayaa lagu sheegay in weerarada ‘Argagaxiso’ ay sabab u yihiin dib udhaca baaxadda leh ee ku yimid dhismaha saafaradda.
Dowladda Kenya waxay sheegtay in 35% ladhisay saafaradda oo la filayay in ay ka koobnaato dhowr qeyb oo ay ku shaqeeyaan saraakiisha safaaradda, shaqaalaha iyo diblumaasiyiinta.
bishii September 2012 weerar naf-hurnimo oo dagaalyahan katirsan Xarakada Al Shabaab ka fuliyay Hoteelka Jazeera waxaa si dirqi ah ku badbaaday Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Kenya oo xiligaasi ka qeyb gelayay xaflad lagusoo dhoweynayay Xasan Gurguurte.
Kenya ayaa dagaal culus uga jirta gobollo dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya waxayna Kenya ku lug leedahay gumeysi daran oo lagu haayo shacabka Soomaaliyeed.